Ukutshaya kunye noTywala ukuyeka ukuNceda uLuntu lwe-LGBTQ yaseVermont
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » LGBTQ
INKXASO SIMAHLA NENKXASO YOKUXHASA I-LGBTQ
Womelele ngokwaneleyo ukuba ungayeka ukutshaya. Uluntu lwe-LGBTQ lutshaya kwinqanaba eliphezulu kunabantu abathe tye / cisgender, kodwa abantu be-LGBTQ boyisa ubunzima mihla le. Unokoyisa umlutha wecuba, nawe. Sinezixhobo, izixhobo kunye neenkqubo ezilungiselelwe ukukunceda uyeke ukutshaya kunye nezinye iimveliso zecuba.
Fumana umboneleli wezempilo onomdla we-LGBTQ ngokusebenzisa Iprojekthi yezeMpilo eyahlukeneyo yeVermont . Izenzo zamalungu zizibophelele kukhuseleko, ukungqina, inkxaso kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kwabo bakwi-LGBTQ.
Fumana uncedo lokuyeka kwi-802Quits. Funda nzulu malunga noncedo lokuyeka ukuyeka, kubandakanya ii-nicotine patches, i-gum kunye ne-lozenges.
Zilungiselele ukuyeka ngamanyathelo alula, njengokulungiselela ikhaya lakho, indawo yokusebenzela kunye nemoto. Funda indlela yokulungiselela.
Tyelela Inethiwekhi yesizwe ye-LGBTQ yecuba .
Thetha nomboneleli wakho wezempilo malunga amayeza kwaye uyeke uncedo olulungele wena.
Ukuba ufuna ukuqala:
Call I-1-800-QUIT-NAMHLANJE simahla ukuhambelana nokuyeka ukunceda ngoncedo lomntu ngamnye;
Yeka kwi-intanethi usebenzisa izixhobo kunye nezixhobo ezinjengeebhodi zemiyalezo, uyeke ukucwangcisa kunye nokuyeka ukulandelela inkqubela phambili.